China Mpamboatra bobongolo mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Fanaovana bobongolo (Die making) dia ny fizotry ny famokarana ireo singa arakaraka ny sary famolavolana bobongolo, ny fampiasana fanapahana mekanika, ny fametahana ny masinina, ny fitsaboana an-tampony ary ny fitsaboana ny hafanana, ary farany ny fanangonana ny faritra rehetra ho lasa bobongolo araka ny sary famolavolana.
Ny fanamboarana ny lasitra sy ny famokarana dia indostria lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana maoderina. Izy io dia manome fitaovana fanodinana manan-danja ho an'ny famokarana indostrialy avo lenta.
Inona ny bobongolo?
Ny bobongolo (bobongolo, maty) dia fantatra amin'ny anarana hoe "renin'ny indostria", izay fitaovana fanodinana zava-dehibe mba hahatratrarana avo lenta, fahombiazana ary famokarana lehibe amin'ny indostrian'ny famokarana maoderina. Amin'ny famokarana indostrian'ny bobongolo, ny bobongolo sy ny fitaovana isan-karazany dia ampiasaina mba hahazoana ny vokatra takiana amin'ny alàlan'ny tsindrona, famolahana fofona, fitrandrahana, fanariana bobongolo na fanaovana hosoka, fandorana, fametahana ary fomba hafa. Raha fintinina, ny bobongolo dia fitaovana ampiasaina hanamboarana zavatra mamolavola. Ity fitaovana ity dia misy ampahany samihafa, ary ny bobongolo isan-karazany dia misy faritra samihafa. Izy io dia mahatsapa indrindra ny fanodinana ny endrik'ilay zavatra amin'ny alàlan'ny fanovana ny toetoetran'ny fitaovana mamorona. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe "renin'ny indostria".
Inona ny famokarana lasitra?
Saika ny lasitra rehetra dia vita amin'ny vy, ary ny 90% amin'izy ireo dia vita amin'ny vy.
Eo ambanin'ny hetsiky ny hery ivelany, ny bileta vy dia lasa fitaovana amin'ny famokarana misy endrika sy habe manokana. Ampiasaina be amin'ny stamping, forging mould, lohateny mangatsiaka, extrusion, faritra metallurgy vovoka manery, casting pressure, ary koa plastika injeniera, rubber, ceramika ary vokatra hafa amin'ny famatrarana na famolahana tsindrona. Ny bobongolo dia manana endrika contour na lava-kazo anatiny manokana, ary ny banga dia azo sarahina arakaraka ny endriny contour (banga) amin'ny alàlan'ny fampiharana ny endrika contour amin'ny sisiny. Ny endrik'ilay lavaka anatiny dia azo ampiasaina hahazoana ny endrika telo-habe mifanentana amin'ilay bileta. Ahitana ampahany roa amin'ny bobongolo matetika: bobongolo mihetsika sy bobongolo raikitra (na bobongolo totohondry sy kofehy) izay azo sarahina sy atambatra. Rehefa misaraka ireo ampahany dia atsofoka ao anaty lavaka bobongolo ireo banga mba hikatona rehefa akatona. Ny bobongolo dia fitaovana marim-pototra miaraka amin'ny endriny sarotra ary mitondra ny tanjaky ny bileta. Izy io dia manana fepetra avo lenta momba ny tanjaka amin'ny rafitra, ny henjana, ny hamafin'ny faritra, ny fahamendrehana amin'ny sehatra ary ny fahamendrehana amin'ny fanodinana. Ny haavon'ny famokarana bobongolo dia iray amin'ireo marika manandanja amin'ny haavon'ny famokarana mekanika.
Ny fizotry ny famokarana bobongolo dia misy: famolavolana bobongolo, fanodinana bobongolo, fanaraha-maso ny bobongolo ary fanandramana fitsapana, fanovana sy fanamboarana ny bobongolo ary fikolokoloana bobongolo.
Matetika ny fanodinana famolavolana bobongolo dia azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny fanaovana hosoka, fanapahana, fitsaboana hafanana ary fivoriambe ary ireo dingana hafa. Mba hiantohana ny kalitaon'ny famokarana lasitra sy hampihenana ny vidin'ny famokarana, ny fitaovana dia tokony hanana fanalefahana tsara, fanapahana fahasarotana, hamafisana ary fitotoana, ary tokony hanana oxydation kely ihany koa, fahatsapana ho amin'ny fikajiana ary hamonoana ny fironana amin'ny famotehana deformation. Ny fanapahana dia mitaky 70% ny enta-mavesatra amin'ny fanodinana bobongolo. Ny dingana manakiana indrindra dia ny fahazoana ny lavaka izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny endrika, ny refin'ny refy ary ny kalitaon'ny tany, ary koa ny mekanisma rehetra.
Dingana fanaovana ny bobongolo
Ny vy banga amin'ny fanaovana ny bobongolo dia nakodia sy niforona tao amin'ny orinasa vy, ary ny zavamaniry bobongolo dia afaka misafidy mivantana hividy. Ny fanaovana bobongolo dia ny fanaovana ireo banga vy ireo ho bobongolo afaka mamokatra vokatra amin'ny famokarana betsaka. Ny fanamboarana ny bobongolo dia misy ny famolavolana bobongolo, ny milina ary ny fanangonana ny fotony sy ny bobongolo.
1. Ny famolavolana bobongolo dia vita amin'ny injeniera matihanina. Ny famolavolana bobongolo no fenitra sy fototry ny famokarana bobongolo iray manontolo. Araka ny fepetra takian'ny firafitry ny vokatra sy ny refy amin'ny refy dimensional, ny fotoana fampiharana ary ny vokatra andrasana, ary koa ny fametrahana ny milina fanorohana tsindrona, ny injeniera dia mila mifidy vy ho an'ny faritra tsirairay amin'ny bobongolo ary mamaritra ny firafitra sy ny fizotran'ny bobongolo. Ny fahamendrehana amin'ny famolavolana bobongolo dia mamaritra ny fahasarotana amin'ny famokarana, ny vidiny, ny fiainam-panompoana, ny famokarana ary ny kalitaon'ny vokatra.
Ny bobongolo dia karazana fitaovana lafo vidy. Ao amin'ny famolavolana, ny injenieranay dia mampiasa rindrambaiko handinihana sy hanahafana ireo fizarana, fizarana lalana, teboka fampidirana ary koa ny firafitr'ireo faritra.
2. Fametahana lasitra. Ny volavolan-dalàna dia mamolavola fitaovana milina araka ny endrik'ireo injeniera sy ny antontan-taratasiny. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana sy fitaovana milina fanapahana ampiasaina hamoronana bobongolo dia misy ny CNC, EDM, WEDM, lathe, grinder, milina polishing, sns. Ireo fitaovana milina mandroso sy marina dia afaka manatsara be ny laité bobongolo, mampihena ny tsingerin'ny famokarana ary mampihena ny vidiny. Ny karazana bobongolo isan-karazany dia mampiasa fitambarana fitaovana milina isan-karazany: bobongolo tsindrona sy bobongolo maty matetika dia mampiasa CNC, EDM ary WEDM. Ny bobongolo fanosotra sy ny bobongolo extrusion dia matetika mampiasa CNC sy WEDM
3. Fivoriana bobongolo. Ny fivorian'ny bobongolo dia miankina amin'ny teknisiana. Izy io dia misy ny die core, ny block slide, ny post guide, ny mekanika fanesorana, ny fampifangaroana ny fefy maty sy ny motera, ny fivorian'ny mpihazakazaka mafana, ary koa ny ampahany tsy azo tapaka, ary ny fivorian'ny farany. Arakaraka ny maha-avo ny mari-pahaizan'ny milina no mampihena ny isan'ny asan'ny die fivoriana, ny fohy kokoa ny tsingerin'ny famokarana ary ny fihenan'ny vidiny. Aorian'ny fahavitan'ny fivorian'ny maty dia ilaina ny manandrana, manamarina, manafoana ary manatsara ny maty mandra-pamoakany vokatra mahomby amin'ny habetsahana hafa.
Fomba fanaovana bobongolo mahazatra
EDM-Machining famoahana herinaratra
Fanapahana elektroda tariby WEDM
Mety ary manangona lasitra
Ny orinasa Mestech dia mazoto amin'ny famokarana bobongolo plastika sy ny tsindrona vokatra, ary koa ny bobongolo fitaovana (famonoana vy maty, famonoana maty) famokarana sy famokarana faritra vy.
Previous: Volavola bobongolo
Manaraka: Ahoana ny fomba famolavolana faritra plastika
Lasitra plastika ho an'ny milina fanesorana volo laser
Lasitra mihazakazaka mafana